घटना शंकास्पद भएपछि प्रहरीद्वारा घाटबाटै शव नियन्त्रण ! - Everest Dainik - News from Nepal
घटना शंकास्पद भएपछि प्रहरीद्वारा घाटबाटै शव नियन्त्रण !
जलाउन घाट पु-याएको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान थालेकाे छ । अाज वीरगन्ज महानगरपालिका २३ प्रसौनीविर्ताकी करीब २८ वर्षीया अन्जुदेवीको शव घाटबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
घाटमा प्रहरी पुगेपछि मलामीको भागाभाग भएको थियो । अन्जुका पति पन्नालाल फरार छन् । परिवारकै सदस्यबाट अन्जुको हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि लाश नियन्त्रणमा लिएको पर्साका डिएसपी अन्नतराज शर्माले जानकारी दिए । उनले शव जलाउन गैया घाटमा लैजादै गर्दा प्रहरी पुगेपछि शव छोडेर मलामी भागेकोले घटना शंकास्पद देखिएको बताए ।
याे पनि पढ्नुस हिटलरको जस्तो उग्रवादी सोचले मुलुक चल्दैन : उपाध्यक्ष यादव
प्रहरीले मलामी गएकामध्ये कृष्ण दास र उमेश दासलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कसैलाई पनि नियन्त्रणमा नलिएको दावी गरेको छ । अन्जुको शव पोष्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
याे पनि पढ्नुस भारतबाट विरगञ्जमा पन्ध्र लाख मूल्यबराबरको प्याज अायात